Suuqa kala iibsiga Maanta: Real Madrid oo la Wareegeysa Haaland, iyo Kylian Mbappe, Jules Kounde oo ka Carooday Kooxdiisa Sevilla iyo Qodobo kale | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Suuqa kala iibsiga Maanta: Real Madrid oo la Wareegeysa Haaland, iyo ...
Suuqa kala iibsiga Maanta: Real Madrid oo la Wareegeysa Haaland, iyo Kylian Mbappe, Jules Kounde oo ka Carooday Kooxdiisa Sevilla iyo Qodobo kale
Daafaca reer France Jules Kounde oo 22 jir ah ayaa aad uga carooday Sevilla oo ka iibin weyday Chelsea. (Express)
Daafaca reer Ivory Coast Serge Aurier, oo 28 jir ah, ayaa u furan inuu u dhaqaaqo Arsenal ka dib markii uu joojiyay qandaraaskiisii Tottenham maalintii ugu dambeysay. (Sky Sports)
Real Madrid ayaa diyaar u ah inay u dhaqaaqdo weeraryahanka Norway iyo Borussia Dortmund Erling Braut Haaland, oo 21 jir ah, iyo 22 jirka reer France iyo kooxda Paris St-Germain Kylian Mbappe xagaaga soo aadan. (Mail)
Kooxda reer Spain ayaa sidoo kale xiiseyneysa inay Bernabeu ka keento Manchester United xiddiga qadka dhexe ee Faransiiska Paul Pogba oo 28 jir ah . ( Manchester Evening News)
Baacsigii ay Chelsea ugu jirtay Haaland ayaa dib u dhac ku yimid kadib markii loo sheegay inay bixin doonaan mushaar dhan £ 825,000 toddobaadkii. (Mirror)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer England Declan Rice, oo 22 jir ah, ayaa ku adkeystay inuu ku darayo qandaraaska lagu burburin karo qandaraaska cusub ee West Ham madaama uu qorsheynayo inuu ka dhaqaaqo sannadka soo socda. (90min)
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka hor istaagay shan ciyaaryahan inay ka tagaan Old Trafford xagaagan. (Mirror)
Juventus ayaa iska diiday fursad ay kula soo saxiixan lahayd weeraryahanka reer Uruguay Edinson Cavani, oo 34 jir ah, kana yimid Manchester United wax yar ka dib markii uu 36 jirka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo u dhaqaaqay dhanka kale. (Mirror)
Barcelona kubad sameeyaheeda Miralem Pjanic, oo 31 sano jir ah ayaa mushaharkiisa jaraya si amaah ugu biiro kooxda Besiktas xilli ciyaareedkan. (Goal)
Wolves ayaa qorsheyneysa inay dib u eegto xaaladda qandaraas ee garabka Adama Traore ka dib markii ay diideen labo dalab oo xagaagii ay Tottenham ka gudbisay 25 jirka reer Spain. (Birmingham.Live)
Manchester United ayaa ku dhibtooneysa inay sii wadato dalabka maaliyadaha Cristiano Ronaldo ka dib markii ay dib u dhac ku keentay soo saarayaasha Adidas. (indepedent)
Previous articleDagaal u dhaxeeyo Taalibaan iyo kooxda NRF oo ka socdo dooxada Panshir
Next articleXulalka England iyo Belgium oo guulo gaaray, Sweden oo dubatay Spain, Italy oo lagu dhagay, iyo Natiijooyinka kulamada Isreeb-reebka Koobka Adduunka